Luzokwenza ushintsho uqeqesho embonini yamatekisi | News24
Luzokwenza ushintsho uqeqesho embonini yamatekisi
UKUQEQESHWA kosomatekisi emva kokuba sekuhlelwe amahhovisi lapho kwenzeka khona kungekude nje, kubhekeke ukuthi kushintshe indlela yokwenza kubashayeli bamatekisi.
Lokuqeqeshwa kuzophinde kwenze abagibeli bazizwe bephephile uma besebenzisa lezi zithuthi zomphakathi.
Lokhu kuvezwe usihlalo woMgungundlovu Taxi Association, uMnu Bheki Sokhela, lapho echaza ukuthi bona njengemboni yamatekisi ngabe yini abayibheke ukuthi lolu qeqesho ilwenze kule mboni.
Etshele i-Echo ukuthi into abantu abangayazi ukuthi uhlelo lokuhlomulisa abasebenzi bamatekisi into engaqali manje njengoba kuyinto ebivele ikhona kodwa ixhaswe inkampani yezimoto i-Toyota. Uthe indlela lokhu obekwenzeka ngayo bekuye kunyonyobelwe umshayeli, kube nabantu abazofana nabaseshi abayimfihlo abamlandelayo bebheka ukuthi ngabe ubaphatha kanjani abagibeli kanye nje nokuziphatha kwakhe uma esuke esemsebenzini.
“Lokhu bekuye kwenzeke uthole ukuthi loyo mshayeli akazi ukuthi kunabantu abamhleli izithende uma esuke esebenza. Uma-ke loyo mshayeli eye wakugcwalisa konke okudingekayo ubeye ahlomuliswe ngomklomelo omkhulu. Uma-ke sibheka kulolu qeqesho esinalo njengamanje, sibheke ukuthi lwenze olukhulu ushintso ezimpilweni zabo abashayeli kanye nabagibeli.
“Lapha sibala impatho, indlela yokukhuluma nangendlela nje umshayeli aphatha ngayo umsebenzi. Okunye okuhle kakhulu ukuthi nabanikazi bawo amatekisi nabo bazoba ingxenye yalo lolu qeqesho,” kusho uSokhela.
Uqhube wathi lolu qeqesho luzophinde lenze umsebenzi ukuthi ubaluleke kakhulu kubashayeli.
“Silwa nokuqeda ukuthi abashayeli bamatekisi bathi basabambile uma besemsebenzini,” kusho yena.
“Lokhu sikuqeda kanjani na, sikuqeda ngokuthi kwenziwe kube umgomo ukuthi umshayeli wetekisi uthola isitifiketi sokuthi uqeqeshiwe ukuthi abe ngumshayli wetekisi?
“Uzonikezwa isitifiketi umshayeli esizobe siveza ngokusobala ukuthi uqeqeshiwe ukuthi abe ngumshayeli wetekisi futhi aphinde abe semgwaqeni. Kanjalo nabanikazi bamatekisi nabo bazocijwa ukuthi bazi kabanzi ngebhizinisi. Singakusho nje singananazi ukuthi ngalolu qeqesho kuzovuleka imiqondo kuphinde kusebenzeke ngendlela okumele ukuthi kusetshenzwe ngayo. Kuzothi-ke uma konke sekumi ngomumo ukuthi kuqale uqeqesho, bonke ososeshini bese beyaqala emahhovisi azobe eqokwe ososeshini babo ukuthi kusetshenzelwe kuwona.
“Sijabule kakhulu ngalolu qeqesho futhi silubheke ngamehlo abomvu ukuthi luzofika noshintsho olukhulu futhi nabagibeli bethu bazozizwa bemukelekile futhi behloniphekile ukusebenzisa amatekisi,”
Uphinde wanxusa abanikazi bamatekisi ukuthi bavumele abashayeli ukuthi baye oqeqeshweni. Wabuye wathi bazohlanganisa amakhanda ukuqinisekisa okukho ukuphazamiseka
“Uzonikezwa isitifiketi umshayeli esizobe siveza ngokusobala ukuthi uqeqeshiwe ukuthi abe ngumshayeli wetekisi futhi aphinde abe semgwaqeni. Kanjalo nabanikazi bamatekisi nabo bazocijwa ukuthi bazi kabanzi ngebhizinisi,” kusho usihlalo woMgungundlovu Taxi Association uBheki Sokhela